Siyavuyisela ngeKrisimesi 2017 kwivesi kunye neprose, kwimifanekiso nakwimisms, ngesiNgesi. Mhle kunye nehlekisayo mfutshane ukunyanzela iKrismesi
Okunye Ieholide IKrismesi
Ndiyakuvuyisela ngeKrisimesi 2017 - enhle, emfutshane, ehlekisayo kunye ehlekisayo. Indlela yovuyisana ngeKrismesi kwindinyana kunye neprose, kwiisms kunye nemifanekiso
Iqhwa elincinci, ukuvumba kwemithi ye-firiti kunye namakhandlela, iingoma zeKrisimesi kunye nobusuku obude beenkwenkwezi. Ihlabathi lonke lazaliswa ngothando, uvuyo kunye nokukhanya okungapheliyo. Umthendeleko woKuzalwa kukaKristu uvuselela uvuyo olungenakuthelekiswa entliziyweni yabantu kwaye akashiyi mntu. Ukunqoba kwemilingo yezinto ezinyantisayo, izihlwele zezithethe kunye neendlela ezininzi zokungafi zibhekwa njengeyona nto ibalulekileyo kwaye ilinde ixesha elide kunye noMnyaka omtsha kunye nePasika. NgoJanuwari 7, ukuvuyiswa kunye neendaba ezonwabileyo zokuzalwa kukaYesu ziyavakala kwaye zibonakala kuyo yonke indawo: emakhaya, ezindleleni, kwiitoni kunye neethelevishini. Njengawe nawaphi na iholide, abantu, baphefumlelwe kwaye banandipha injabulo yonke, banikezela ngokunyanisekileyo nangomusa ukunyanzela kwiKhisimusi 2017, thumela imifanekiso emihle kunye neengoma, thumela iifom ezimfutshane kunye ezimnandi.
Ngaba sele ulungele ukuhambelana ngokufanelekileyo kwindinyana okanye iprose yeKhisimusi 2017? Hayi? Ngoko lixesha lokuhlaziya iqoqo lethu.
Uvuyo olukhulu ngeKhisimusi 2017 kwivesi
Ukudibanisa iKrisimesi kuqala ngomhla weeholide. Abantu ngokuhlwa ngoJanuwari 6 kuthiwa ngu-Eva weKrisimesi. Ngaphambi kokunyuka kweenkwenkwezi yokuqala kwindalo, kuvunyelwe ukuba basebenze badle. Kodwa ekufikeni kwezulu elincinane lasezulwini, idilidi ngokwenene imilingo ikhupha: zonke iintsapho zihlangana etafileni kunye nezitya ezi-12 (kuquka i-osovo), abantu abancinci baya kwi-carol, kwaye abantu abadala baya kubuthana ngokukhawuleza ebandleni ngenkonzo yobusuku. Okwangoku, bonke abantu abaphefumlelweyo nabanandiphayo baqala ukuphasana kakuhle kwiKrisimesi. Ngokwamabali eBhayibhile, kwakubusuku boJanuwari 7 ukuba uMsindisi, uMesiya, uNyana kaThixo, wazalwa. Musa ukulibala kunye nawe kwiKrisimesi engcwele 2017 thumela i-intanethi enhle kunye nenhle kunye neendaba ezibalulekileyo kuzo zonke izalamane nabahlobo. Iholide yeKrismesi yinkcazo ecacileyo. Abantu, iintaka, izilwanyana ziyavuya. Irismesi ifikile, vula umphefumlo wakho, iifestile, intliziyo, iingcango. Ndifuna ukukuhalalisa ngeKrismesi, Kuya kukunika iqhwa elimhlophe, Uthando, ukufudumala, impilo, ubuhlobo, uvuyo. Kwangathi isibhakabhaka singakuva ukuhleka kwakho.
Iqhwa liwa lihle kwaye lihlutha elikhanyayo elikhanyayo endlini! Namhlanje iholidi inomnandi kwaye inhle, iya kubhiyozela nathi ngokukhanya okumhlophe! Sihlala sivuya kakhulu ngeKrismesi! Ivelisa induduzo, ilungileyo, imfudumalo enkulu! Namhlanje ndivuyisana nawe, Ukuze ungene endlwini ngokuvuya!
Ngosuku lokuzalwa kukaKristu Ubuhle babuyela ehlabathini. NgoJanuwari iqhwa leRadioance likhupha. NgoJanuwari iNast i-Alphina ayiyi kunika. Ikhephu likaJanuwari Inhle kakhulu yeyona yonke into: Usuku luqhakazile kwaye lunemibala kwaye lukhanya phantsi kwenyanga. Yaye nganye imihla kaJanuwari incinane, kodwa yangaphambili ininzi. Kwaye kufanelekile kwimikhosi kunye neentlanganiso - naziphi na iinyanga.
Imbeko yoMveli kwiprojekthi yeKhisimusi 2017
Unqulo lobuKristu luneminyaka engaphezu kwe-2 leminyaka ubudala. Kulo xesha, abantu bajika kuye: kwiintsuku ezilungileyo kunye eziqaqambileyo - ngokubulela, kunye nokudabukisayo nokuvula - kunye nezicelo zoncedo. Wonke umntu unesizathu sakhe kunye nezizathu zokuthetha noMninimandla onke. Kodwa zonke ngaphandle kokungafani ziyadibanisa iziganeko zonqulo ezininzi ezenzeka kumawaka eminyaka edlulileyo. Enye injalo nguKuzalwa kukaKristu. Ekubeni amaxesha amaninzi mandulo, abantu bathuthumela bekulindele ilanga eholide. Kwaye ngokuza kweKhisimesi, benza imikhosi ebalulekileyo, bayidla kunye behalalisana nombingelelo wendabuko kwiprose kunye neenqweno zokuvuna kunye nemfuyo enempilo. Namhlanje, iimbuliso zendabuko kwiprose kunye noKuzalwa kukaKristu ziye zathola umthunzi ohlukileyo. Esikhundleni senzalo enkulu kunye nokuxhamla okunomusa, abantu banqwenela elinye inhlanhla emsebenzini wabo, ulonwabo kwintsapho kunye nobudlova ngaphakathi kwindlu. Vumela iKrismesi iqhawule ngokucacileyo kuwe iya kukhanyisa indlela yakho evulekileyo, Vumela ubomi bakho bungabi bubi, kwaye uya kuqonda ukuba iyintoni into ebalulekileyo! Ukulungelelaniswa nolonwabo kwihlabathi, ukufudumala kwekhaya lokuthuthuzela. Kwaye ulutsha alukho kwi-elixir. Uya kuba usuka ngoku ngoku, kwaye ngobubele beentliziyo zabantu-kwaye lo luvuyo lwesithsaba!
Kwiholidi leKrisimesi elimnandi ndifuna ukunqwenela wena, Impilo yokuqala iqinile, kwi-shishini ukuphumelela, Uvuyayo ukuba, ungagxili, Ungabi lusizi, Nceda abo bathandekayo, Thanda abantu bakho!
Unyaka omtsha udlule kwaye Khrisimesi iza kuye. Kuza kuba netafile evulekile kwakhona, Kuya kufuneka ukuba uphuze, kwaye kwakhona i-saladi ukuba idle, Yaphinda ujonge ukuphulaphula. Zonke iindwendwe ezisetafileni, Jabulela iKrisimesi!
Umfutshane omfutshane uyathokoza ngeKrisimesi 2017
Ngamaxesha onke, ngeKrismesi, abantu babehlekisa, bephumla baze bachithe iiholide zabo ngeendlela eziqhaqhaqhelekileyo nezingavamile. Eyona nto ibaluleke kakhulu phakathi kwamasiko ikhupha. Bembethe izambatho zemveli eziqaqambileyo zezilwanyana, iidemon, abathakathi kunye nabanye abalingiswa, abancinci nabakudala balandela uKrismesi endlini ngendlu, bathelela iifolishi, bahlabelela iingoma, banikezela abanikazi abancinci kunye neentloni ngokubongela ngokubuyisana, izipho kunye neengqekembe. Xa kudlula iminyaka, izithethe ziye zaba lula. Ukugqoka kuye kwalahleka ukuthanda kwayo, kodwa ukuvuyiswa ngeKrisimesi kusabaluleke kakhulu. Ngoncedo lwabo, abantu banamhlanje banqwenela izihlobo kunye nabahlobo konke okusemgangathweni, ukubonisa uthando kunye nokufudumala, ukuphakamisa imizwa kunye nokudala umoya oyingqayizivele wemikhosi yasebusika. Funda kwaye uhamba phambili ngokukhawuleza ukhala ngoKhisimusi 2017 ukususela kwiqoqo lethu. Kwithuba elona xesha liyimfuneko ukuba niphumelele kwaye nilumkise abo bathandekayo. Intsimbi yeKrisimesi ikhala - i-Deer chime! Izipho, umthi weKrisimesi, uyavuyisana ... Bonke abantu ebusika bombongo baxabisa. Umntu osemladini okanye kunjalo, Ngomhla wokumangalisa ummangaliso omkhulu, Iholide enkulu ikulindele isilumko, Kwaye ihlakaniphile, kwaye ikhulelwe. Yonke iyavuyiswa ngeKrisimesi, iwayini ininzi ininzi, ikwabelana ngokucatshulwa ngumlingo, omnye umangaliswa!
Siyavuyisela ngeKrisimesi! Ndiziva ngayo yonke into yam yangaphakathi: Uya kubhiyozela iholide, kwaye kusasa, ugule kakhulu, Hlasela kwaye ukhumbule, Ufumene njani ulala embhedeni?
IKrismesi ifanelwe ukukhonza. Kodwa musa ukukhawuleza kwiinqwelo zekhephu. Iqhwa akuyona yindalo yomoya. Esi simo sengqondo! Iwindow inhle kakhulu, ixesha liyeka ukusebenza. Amalahle apholisa ubhiya, Leqhwa eliqhenqileyo! Intandokazi "iKlinskoe" iya kuvulwa. Ewe, ndiya kuvala umnyango. Hlala uhlala nam, mhlobo wam omhle!
Ubungqina obugqwesileyo kwiisms ngeKhisimusi 2017
Ukuvuyisana ngeKrisimesi kuyahluka kakhulu: mfutshane kunye nexesha elide, njenge-sms okanye iposikhadi, imibuliso yomculo kwi-mobile okanye nge-imeyile. Kodwa iimfuno ezifudumele kunye neyona nto ikulungele ukubonisa umhlobo wakho ngamazwi akho kwiso. Ngelo xesha, umntu ufuna zonke izinto ezibalulekileyo neziyimfuneko-uxolo, ukufudumala, ulonwabo kwindlu kunye nenhlalakahle kwisikhwama. Konke kuzo zonke izinto, umntu othandekayo ulindele, into ahlala ephupha ngayo. Ukuvuyiswa okunjalo ngeKrismesi, kuba abantu abangenakuthemba banokumisela ngokufanelekileyo ixesha elifanelekileyo kunye neziganeko ezilungileyo. Yaye khumbula: igama elihle liyamnandi kubo bonke abantu. Musa ukuchulumisa nakwabantu abangaqhelekanga okanye abantu abangaqhelekanga. Yaye xa ngaba nabanye abahlobo intlanganiso yomntu engeke yenzeke, thumela imfutshane imfesane kwiSMS ngeKrisimesi ka-2017. Ndiyakuvuyela namhlanje Ngomhla ocolileyo, ocolileyo, ococekileyo, ndifuna nje uvuyo, iMpilo, uxolo! Uvuyo lweKrismesi!
NgeKrisimesi, njengommangaliso, Kukhona umlingo. Ukubhoba kuyo yonke indawo, Kuyo yonke indlu iyangqongqoza! Ingxaki zazikho? Wonke umntu uya kushiya! Usizi, iintlungu - nakhona! Kwangathi nje kuphela uvuyo olulindeleyo, Kwangathi uvuyo lube ebomini bakho!
Vumela uKrisimesi ulethe uxolo kuwe, uvuyo ebomini. Yonke into efunwa ngumphefumlo, Kwangathi iNkosi ingaguquka ibe yinyani! Inhlanhla, uxolo, uxolo Makukunike iKrisimesi!
Imibala evuyayo kwimifanekiso yoKuzalwa kukaKristu 2017
Akunakwenzeka ukuba kuya kubakho ukufumanisa ukuba iimbuliso zokuqala ezilungileyo zenziwa kuKuzalwa kukaKristu. Ibali alithe cwaka ngalokhu. Kodwa kukho into malunga nekhadi lokuposa elibalabala. Umbhali walo wayengumculi waseNgesi uDobson. Nguye lowo ngo-1794 owawufumana umfanekiso weKrismesi ukuvuyisana nomhlobo othandekayo ngendlela engavamile. Kakade, ummkeli wayeyolonwabo. Kwaye emva kwezinto ezimbalwa, umhlobo wakhe wathabatha umfanekiso oholide kwaye wayithumela njengesipho kubahlobo bakhe abakhulu. Ukususela ngoko, isithethe sokubonga imibala kwimifanekiso kunye noKuzalwa kukaKristu kwakwazi ukunqoba ihlabathi lonke. Kwintsimi yaseRashiya, i-Easter yokuqala kunye nobuliso beKrisimesi kwiposikhadi zakhishwa ngo-1898. Iimpawu zeeholide ezikhanyayo ezithintelayo, kwakhona ziyavunyelwa ukusebenzisa. Kodwa ukuvuyiswa kwimifanekiso yeKrismesi ngo-2017, ekhoyo ngoku kwi-Intanethi, akunakwenzeka ukuba umntu akaze avumele!
Imemori yeKrisimesi ngesiNgesi
Namhlanje, ngokungaqhelekanga ukusebenzisa amakhadi athatywayo okuvuyela uKrismesi. Ihlabathi lazanyazanyiswa yizinto zobuchwepheshe. Ngoku iifowuni kwiiselula, imiyalezo yomnatha woluntu kunye ne-imeyile ithathe indawo ekhokelayo. Ngokukhawuleza ukuvuyisana nomntu onendleko kwiholide eqaqambileyo ngokuthayibha inani lembalwa kwifowuni yefowuni. Yaye ukuba unika ixesha lokufowunela okufutshane kwi-Skype, awukwazi kuphela ukuhlawula iibinzana ezimbalwa, kodwa kwakhona ubone isihlobo esisekude kwisikrini sakho esweni. Ewe, indlela yokuqhagamshelana nombhalisi idlala indima ebalulekileyo, kodwa kubaluleke ngakumbi ukukhetha ukubingelela okulungileyo kunye nenqwenelekayo enomdla kunye nesifiso somusa. Ngokomzekelo, ivesi elifutshane, iprose yendabuko okanye isandi seKrismesi esithandwayo ngesiNgesi. Kwangathi le Krismesi izalise ixesha lokufudumala, uthando kunye nolonwabo!
Kwangathi unyaka ozayo ungakukholisa kunye nokuvuya. Yiba neKrisimesi! Ngamana uKrismesi mayizaliswe ngumshushu, uthando kunye nolonwabo! Kwangathi unyaka ozayo ungazisa uvuyo nokuzaliseka! Uvuyo lweKrismesi!
Eyona nto iminqweno kumhlobo wam othandekayo ngomnyaka omangalisayo ozayo! Kwangathi ilanga lonwabo lihlala likhanya ngaphezu kwakho! Ngamana ndingathanda ukusijikeleza! Kwangathi unomnyaka omtsha omnandi! Unomdla kumhlobo wam othandekayo kunyaka ozayo! Yeka uvuyo njengelanga ukuhlala kukhanya kuwe! Vumela uthando lukujikeleze! Unyaka oMnandi!
Ndiyabonga ngokundinika ithuba lokusebenza nawe kulo nyaka. Kube yinto ezukileyo kunye namava amnandi kum. Ndikunqande iKrisimesi kunye nomnyaka omtsha uzaliswe zonke izinto ezilungileyo. Ndiyabulela ngeli thuba lokusebenza nawe kunyaka owedlule. Kwimi, lo luzuko, kunye nolwazi oluxabisekileyo. Ndikunqwenela ukuba uKrismesi ujabule kwaye konke okusemgangathweni kunyaka omtsha!
IKrismesi yiholide elilindelekileyo elide elide kuluntu kunye nabantwana. Naphezu kwexesha elibanda lasebusika, lithwala ubushushu kunye novuyo. Usuku oluqaqambileyo loMsindisi luvelisa emphefumlweni ngamnye umvakalelo okhethekileyo wokuphakanyiswa nokuthokoza. Yingakho ngeli holide sifuna ukwabelana ngokufudumala nothando kunye nabantu abanomdabu kunye nabantu abasondeleyo: ukunika umntu wonwabele ngeKrismesi 2017 kwivesi kunye neprose, thumela imifanekiso ehlekisayo kunye ne-SMS emfutshane ngeKrismesi.
Umthandazo weKrisimesi 2017 inenhlanhla, ngomtshato, kwimpilo. "IKrismesi yakho, uKrestu wethu uThixo wethu" kunye neminye imithandazo yeKrisimesi
Iipastadi ezilungileyo kakhulu ngeKrisimesi yamaKatolika kunye ne-Orthodox kaKristu 2017-2018
Indlela yokwenza i-Jacken i-Jacket ye-Denim
Inkqubo yokuxilonga - ukucatshulwa kwamagonti emboniselo
Indlela yokuvuya xa ufuna ukulala
Yidla kusihlwa kwaye ungadli!
Izingubo zentwasahlobo eziphathekayo 2016: ukujonga ngokubanzi imizekelo yabasetyhini
Yintoni ukupheka ngoxa utyisa i-Protasov
Iimpawu zeenwele eziqinisekisayo
Ukutya kuka-Irina Ponarovskaya
Ukutshintshwa kwamatye kagogo namhlanje